Fidirana ao amin'ny gara / seranam-piaramanidin'i Delhi, maka ary miditra ao Corbett. Valan-tseranana nasionaly (300 kms / 6-7 hrs). Tonga sy manohy ny fialan-tsasatry ny toeram-pialantsasatra amin'ny alàlan'ny Jungle amin'ny andro fialan-tsasatra mandritra ny fialan-tsasatra ho an'ny hetsika manokana, alina amin'ny toeram-ponenana
Vao maraina be izao dia mankafy fiara fitetezam-paritra ao amin'ny kianja amin'ny jeep mba hijery ny sasany amin'ireo biby sy biby miaina ary biby. Ity tolakandro ity, mandehana indray mandeha fiara fitetezana hafa ary andramo ny vintanao mba hahitana ilay tiger. Ny takariva dia miala voly, mandritra ny alina ao amin'ilay toeram-pitsangatsanganana
Ity maraina manaraka ny sakafo maraina ity dia halefa any Nainital ianao, Mankanesa ao anaty lavaka goavam-be matevina any amin'ny ala kesika sy hazo malemy (116 kms / 2-3 hrs). Mankanesa ary tongava any amin'ny hotely. Ity tolakandro ity dia handehanana mankany amin'ny fitsidihan'i Nainital, hitsidika ny tampon'ny Naini ary hankany amin'ny onjampeo mandeha amin'ny làlan-dàlana afaka mandeha eny amin'ny lakandrano na mankafy ny sambo amin'ny Naini Lake, alina amin'ny hotely.
Androany ianao dia hitsidika ireo farihy tsara indrindra any amin'ny faritra, hitsidika ny Bhimtal, Naukuchiyatal. Taty aoriana dia nankany Ramgarh. Ny fialan-tsasatra amin'ny andro dia miala voly amin'ny fividianana sy ny hetsika ataon'ny tsirairay, mandritra ny alina ao amin'ny hotely
Amin'izao maraina izao ianao dia halefa any Kausani (114 kms / 4-5 ora). Mankanesa ary tongava any amin'ny hotely. Ity tolakandro ity dia mitsidika ny orinasa Tea iray mba hijery ny dingana manontolo amin'ny famokarana ny Tea. Ny hariva amin'ny takariva dia miala voly, mandritra ny alina ao amin'ny hotely
Ity maraina ity dia handefa an'i Auli amin'ny alàlan'ny Joshimath (255 kms / 9 - 10 hrs). Rehefa tonga ny fahatongavanao dia mandeha eo amin'ny toeram-ponenanao any an-tendrombohitra ianao. Ny ambin'ny takariva dia ny fialan-tsasatra ho an'ny hetsika manokana, mandritra ny alina amin'ny hotely
Rehefa avy misakafo maraina ianao dia mitondra fiara mankany Rudraprayag, voatonona taorian'ny anaran'ny Tompo Shiva (Rudra), Ny faritra manontolo ao Rudraprayag dia nahazo fitahiana be voninahitra, farihy sy ranomandry (140 kms / 5 - 6 hrs). Mankanesa ary tongava any amin'ny hotely. Ny andro sisa dia miala voly amin'ny hetsika ataon'ny tsirairay, mandritra ny alina ao amin'ny hotely
Ity andro ity dia miala voly amin'ny fitsidihana ireo tempoly ao sy manodidina an'i Rudraprayag na miala sasatra ao amin'ny hotely misy anao ary mankasitraka ireo toerana mahafinaritra mahatalanjon'ny Rudraprayag, mandritra ny alina amin'ny hotely
Mialoha ny maraina dia mitondra mankany amin'ny tanàna Masina ao Haridwar (160 kms / 6 - ora 7). Mankanesa ary tongava any amin'ny hotely. Ny andro sisa dia miala voly amin'ny fitsidihana ny ganga ghats sy ny tempoly, mandritra ny alina amin'ny hotely
Androany dia halefa amin'ny lalana mankany Delhi ianao (240 kms / 6-7 ora). Mankanesa ary tongava mankany amin'ny seranam-piaramanidina / seranan-tsambo ho an'ny dia an-tongotrao.